विवाहपछि त्याग्नै पर्ने ७ आनीबानी ! « Khabarhub
विवाहपछि त्याग्नै पर्ने ७ आनीबानी !
काठमाडौँ- विवाहपछि पती पत्नीले आपसी जिम्मेवारी र दायित्व बाढ्नु पर्दछ । यसका लागि दुवैले निजी स्वार्थ त्याग गरी सामूहिक खुसी खोज्नुपर्छ ।
कतिपय अवस्थामा बिवाहपछि दम्पतीबीच कुरा नमिल्न सक्छ । एकअर्काको चाहाना र इच्छाहरु बाझिन्छन् । यो स्वभाविक भए पनि दुबैले समझदारी अपनाउन भने आवश्यक हुन्छ । त्यसैले यस्ता बिषयमा दुबैले कतिपय आनीबानी त्याग्नुपर्दछ ।
आज हामी विवाहपछि दाम्पत्य जीवनमा त्याग्नुपर्ने ७ आनीबानीवारे चर्चा गर्नेछौँ-
१. विवाहपछि मानिस घुम्ने, खाने, कपडा किन्ने लगायतका शीर्षकमा अनावश्यक खर्च गर्दछन् । तर, आकाक्षांलाई सामान्य रुपमा पूरा गर्दै खर्च गर्नु बुद्धिमता हुन्छ ।
२. विवाहमा सबैको खर्च हुन्छ । कसैको धेर वा थोर भन्ने मात्र हो । तर, विवाहमा भएको खर्चलाई सधै बहस गर्नु राम्रो हुदैन । यसले सम्वन्धलाई राम्रो गर्दैन ।
३. पतिपत्नीले एकअर्कालाई आवश्यकता भएको विषय र आर्थिक व्ययभार बुझ्नु पर्दछ । यसका लागि दुवैको सहयोगी सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।
४. कहिलेकाही दम्पतीबीच एक अर्काका नातेदारमाथि ठट्टा वा रमाइलो गर्दा त्यो व्यंग्य अशोभनीय हुन्छ । त्यसैले एकअर्काको आफन्त, इष्टमित्रको कुरा काट्न बन्द गर्नु पर्दछ ।
५. विवाहपछि आफ्नो पार्टनरलाई पूरानो प्रेम सम्बन्धको बारेमा चर्चा गरेर चिढ्याउनु हुँदैन । यस्तोमा आफ्नो पूर्व प्रेमी/प्रेमिकासंग तुलना गर्नु निकै घृणित हुन्छ ।
६. विवाहपछि श्रीमान श्रीमतीले एकअर्काको काममा सघाउनु पर्दछ । यो काम तेरो वा मेरो भनेर पन्छाउने बानी निकै खराब हुन्छ ।
७. कहिलेकाही विवाहपछि आफ्नो पार्टनरसंग निकै धेरै अपेक्षा गरीएको हुन्छ । तर, तपाईंको अपेक्षा पूरा हुनैपर्छ भन्ने मनसाय राख्नु भने हुदैँन । अवस्था अनुसार पार्टनरलाई बुझ्न नसक्दा धेरै महत्वाकांक्षा अपेक्षाले सम्बन्ध बिर्गान सक्छ ।-एजेन्सीको सहयोगमा ।
प्रकाशित मिति : २९ कार्तिक २०७७, शनिबार ६ : ४८ बजे